XOG FULL Qudbadii Janan Dignin Kenya iyo Jubaland u Diray Guusha Janan Gedo Uga Dhigan tahay - Wararka Khaatumo , Somaliland , Puntland Iyo Somalia
HomeMaqal Iyo MuuqaalXOG FULL Qudbadii Janan Dignin Kenya iyo Jubaland u Diray Guusha Janan Gedo Uga Dhigan tahay
March 24, 2021 News Maqal Iyo Muuqaal, Wararka Maanta 10
Madaxweynaha Jubbaland, Axmed Madoobe ayaa xilka ka qaaday wasiirkii amniga maamulkaas, Cabdirashiid Xasan Cabdinuur, ka dib markii ay soo baxday in uu la heshiiyay dowladda Federaalka.
Janan ayaa dowladda dagaal kula jiray tan iyo markii uu ka soo baxsaday xabsigii Muqdisho ee uu ku xirnaa. Cabdirashiid Janan wuxuu ka mid ahaa siyaasiyiinta ugu caansan maamulka Jubbaland ee tiirarka adagna u ahaa.
Hadda waxaa la filayaa in Muqdisho la geeyo, balse lama oga waxa dhabta ah ee dowladda uu kula heshiiyay. Dowladdana ma aysan sheegin waxa laga yeellayo maxkamadeyntii ku socotay iyo “dembiyadi” ay horey ugu eedeysay.
Turkiga oo Warkii ugu cuslaa ka soo saartay Canaantii Hore loo Arag.
Runtii, ninkan Janan ah khasaare aad uxun ayaa kuhabsaday, sidan caqliga loogaxadayna in badan ayuu eedi doonaa marka fursaddii uballaqnayd iyo qaabka nacasnimada lagudheehay ee uu iskagaqarxiyay la iskujimeeyo.
Farmaajo sixun ayuu Janan udhagray oo ay u ektahay in hadafkiisu ahaaba inuu siyar oo “ceeb iyo eed kasaliim ah” siyaasaddaba ugasaaro oo tiir iskagaxiro, maadaama uu Janan ahaa caqabada uguweyn ee iskagagudbanayd qaddiyadda reer Diininimo ee uu Farmaajo xasaanaddiisa madaxdinimada qaranka sidaxun ugu adeegsanayo inuu khassab kufushado.
Alxaasil, Farmaajo affartiisii sano wayba kadhamaadeen oo igmasho madaxnimo oo rasmi ah xataa mahaysto oo maheli doono haddii xataa muddokorodhsi gaaban lagugallado. Inuu Janan iskagaran kari waayo in nin isaguba iskadabeyshaday uusan waxbo kusookordhin doonin ayaa dad badan fajiciso kunoqotay xaqiiqatan. Dabcan, lacagta lagulaaluushay mid sahlan ma aha, laakiin Farmaajo qummaati ayuu Janan ulaqmiyay oo uu meel cidla ah kagadhaqaaqi doonaa.
Markuu Farmaajo dhowaan meesha faaruqiyo; misena uu Janan sidan xun isukashifay oo sumcaddiisii iskadilay; Axmed Madoobihii wax walba uhuray in xabsigii uu Farmaajo kudhexqufushayna sidan ba’an ugu abaaldarrooday; Kenyana iskudiray; nin gacmahiisa iskuhalaagay ayuu dadka ugumuuqdaa. Mustaqbal dambe siyaasadda kumalahaan doono, aan ka ahayn in markay ugudhowdahay Gedo guddoomiye loogadhigo.
Waxaase isweydiin mudan, Gedada uu guddoomiyaha unoqon doono siday kudambeyn doonto marka Jubbalandta guud lagucabbiro. Siday ubadantahayna, Koonfur Galbeed baa laraacin doonaa maadaama aanay shuruudaha Maamul Midalleedka laguyagleelo fulin karin. Haddii xataa maamul loogarto – qaaya ahaanba – ma sax bay noqonaysaa in beel keli ah maamul lagayeelo, calaashaan madaxweynaha qaran ayaa kadhashay?
Doon degaysa waa lagaboodaa, Janan se mid quusaysa ayuu iskudhextuuray. Waynu kawarsugi halka ay kudambeyn.
Adigoo Caqli Ilko dheer u ah, Hunguri Ogaadeen u ah, Damacna horogle u ah ayaad isku Dayaysaa inaad ka hadasho siyaasad kaa wayn, waxad Sidataa Hangool Ogadeenkii Abqada Boocada uga raadin Jiray kkkkk kkkk kkkkk kkkk waxad isku xiijisay Reer Diini iyo Janan iyo Farmajo Xilka Dhammaaday iyo garashadii hoose caqligii Fooraray ee Ogaadeen Ilko dheer kkkkk kkkkk Bal Adiga Cidda kaa Cawaansan oo cashar kaa dhiganayso yay tahay? Sida Naag Masayrsan baad Tobon Jeer ku soo celinaysaa Farmajaa dhacay , Dabayshaday iyo hadalladii Dadka cuqdadaysan., waxaan Weli arag Arag Adigoo ka Hadlayo Axmed Madoobe oo Weligii Aan la dooran kkkkk kkkk maantana Doorasho Diidayo, Ogoow Sacyahoow Guska leh Janan iyo Farmaajo waa Labo Nin oo Siyaasad isku diiddan laakiin waa Ehel isla Dhashsy.
Nacaybka Axmed Madoobe iyo Deni u hayaan Beesha Sade ayaa ku Saaxiibeen, iyagoo isku Bshaystay inay Colaad sokeeye Gedo ka Abuuraan taageerana u Muujiyan Kenya .
Amed Madoobe Janan Wuxuu uga Faaidaytsy khilaafka Gedo , Laakiin in Maanta Janan oo Ciidamo wato Dib loogu Jiheeyo Jubboland waa tan kuu cuntami wayday kuguna Xambaartay inaad Dida Dameerkii isaga soo Ciydo ., Fucking garasho liito.
Miskiin iskaburqaday. Aad baan kuugunaxaa xaqiiqdii waayo nin raganimo sheeganaya oo haddana caynkaas ucaaytama waa wax aad loogaxumaado.
Eebbaheen hakuusakhiro uun baan kuugujawaabayaa iyo inaad markasta xusuusnaato in inta qadaf iyo aflagaadho ah ee aad gacmahaaga kuqorto ay adiga kuuguxareysanyihiin kitaabkaaga Aakhiro.
Marna ha is oranin aniga iyo cid kale ayaad wax ugudhimaysaa, adiga uun baa isdhibaateeyay. Anaguse Alxamdulillaah dullinimada heerkaas ah Rabbi wuu nagasarreysiiyay!
Adigu ma Axaadiith iyo Quraan baad Dhigtaa? Mise Garashadu kuuma ifiso inaad Markastaa Dad Mas’uulin ah iyo Qabiil Saarnaato? Maadan Fikirin Dameeryahow Edebta Daran ? Ilaahban ku Dhaartaye Yibir Dhalatay oo Ogaadeen Adaa ka Caqli Liita.
Marwalba Waxad indhaha Fiishka leh ku Eegtaa Hal Beela oo Sade Adigoo Targed ka dhigta Mas’uuliyin kaa Sharaf badan.maxay tahay waxa aad isugu xiijinayso Beesho Sade ? Aragtidaada foorarta iyo Caqli Xumada ku haysa ayyaa kuu diiday inaad is waydiiso waxa aad qorayso ma saxba mise waa Khalad? Dadka Cawaanta ah sidoodii inaad Khaladkaaga Arki waydo Markuu laguu Jawaabsna aad ku xogoto Derbi iyo waa lay caayay war Xoolo Nool baad tahay? Ma Sac Gusleh Baad tahay? Mise Xilbo kuma qabto? War Nin iyo Naag waxaad tahay kama yaqaanee wasakh yahoow aan Xishoon ummadda Agkaaga Urayo ka leexi, hubso waxaad qorayso Nacalad yahay dhareerka Dasdinayso.
Farmaajo iyo Janan iysgaa iska kaa xigo hadday shslay is khilaafeen maanta waa heshiis ee sida Eey Raabbiyo Qabo ha u Dhawaaqine orod Caano boorihii Qaxootiga ka Raadso.
Waa yeelkadaa ee, aan kuuyar caqliyeeyo. Meeshani waa masrax siyaasadeed oo dadweynaha ufuran. Farmaajo iyo Janan iyo intooda kale ee siyaasadda kubiirsanina in qaabkaas loogafaalloodo iyagaa isukasay mar haddii ay siyaasadda ubareereen oo kubiireen. Waatii maahmaahdu ahayd “nin xil qaaday eed qaad”. Majirto cid shakhsi siyaasi ah cid kale kaxigta oo kadifaaci karta marka faallo hufan lagadhiibanayo; in siyaasiga shakhsiyan mise hayb ahaantiisa loojaa’ifeysto ayuun baa daran oo qalad iyo dembiba ah, waalidkiisa oo loodhaco iskabadaa.
Midda kale, beelaheenna Soomaaliyeed siyaasaddu iyagay kusaleysantahay oo ajendahaba u ah, haddii kale labo cali ismasheegateen. Adiga iyo maangaabyada kulamidka ah ha idiin kalasoocnaadeen beel toos loocaayay iyo mid siyaasad ahaan loosoo hadalqaaday ama loogafaalloday – labadu waa kaaf iyo kaladheeri.
Sida aad ogtahay oo markaatigana lagayahayba, anigu shakhsi iyo beel toona macaayo oo ma aflagaadheeyo – xaashaa lillaah; siyaasad ahaan uun baan ugafaalloodaa oo fikradahayga iyo dareenkayga kadhiibtaa, taasna xaq buuxa ayaan uleeyahay maandhoow – sidaada iyo dadka kaleba. Bal carr sheeg mar iyo meel aan ama shakhsi ama beel toos ucaayay!
Yasiro saaxiib, muslimiin iscaayaysa iyo dad ehel Soomaaliyeed ah oo is-aflagaadheynaya mise rag waaweyn oo isjaa’ifeysanaya waa la inoodhaamaa ee.
Dameer Dameer Dhalaybaa tahaye yaa kuu dirsaday inaad ka faallooto Aarimaha Qoys gaara mother fucker baad tahay.
Maxaad uga hadli wayday Dhiigyo cabka Adeerka Axmed Madoobe oo Gummaad iyo Barakacin kufsi iyo Dhac ka Gaystay gonollada Jubboouinka, Maxaad uga hadli wayday Ninka Zizbaarka ah ee Sheegadka Jareerka Puntland hortaagan ee diiddan dawladnimada Somalia ? You fucking dog faalladaadu ma hal Reerbaa? Caqligaagu ma garan wayday inaad ujeedkaaga kala beddesho.
Fucking fucking dhalay oo cuqdadaysan, Ciil qabo oo dayuus ah.
Adiga Khaladka ma lihid ee waxaa Khaladka leh mother fuckerka Marqaannews ee kuu oggolaaday inaad Webs/ kooda ku Aflaagadayso Qabiilo Somaliyeed:
Waxaad ku Matagtaa maalin walbo Meelaan lagaaga Baahnayn, waxaad ka hadashaa Artimaha Beesha Sade iyo Madaxdooda!!!!! Its do Amazing
Ma ahan Dhaliil Arrintaadu waa Personal Attack And Insult for one Family.Qanjir Bukaa tahay waana la Jaraa Cadka Buka, waan aqaannaa Doqon Reer bartay Illaa la Garaaco kama tago.
Ul baad u Baahan tahay sida Dameeraha.
Way Adag tahay inaad is waansanto , Laakiin way Fudutadahay illaa Futada Lagaa khaniiso inaad harto.
Keep your Fucking Dark Brain In Maalmaha Soo Socdo aad arki doonto Bu’aale iyo Jilib oo Ciidamada Alshsbaab ee Axmeq Madoobe isaga Huleelaan then where is Next?
Ilkqyar dabasho iyo dabasho waa meheradeediiye.
Dabin sagaaro iyo ugaasi waa halkey asal wadaagaane.
Ina farmaajo iyo janan waa midgo meel dheerna kama aysan keenin ugaasiga waa u asal.
Mar hadey saas tahay waxba ma soo kordhinayso midgaan midgaan la heshiiye,xoodhinta hargaha sagaarada iyo dabasho daniba way ku celin.
Farmaajo waa ina gumeed kursi uusan istaahilin ayaa loo dhiibay.waxaana khalad ahayd in jaajuuskaa masiirka umada loo dhiibo.waxaase eebbe mahadiis ah in maanta ina gumeedkaas waqtigiisii dhamaaday.kuwa cayayaanka ahee farmaajo maskaxda ka xaday inaynan xukun ku hayn karin bahaluulkan umada iska horkeenay.
Waqti wuu ka dhamaaday mana soo noqonayo.ina gumeed marka ay nabadu joogto futadiisa cirbad caaradeed ma marto marka la isku giijiyana faras shakaalan ayaa ka booda.
Haddii la isdilana kuu daran haddii la isdaayana ku daray.bal migaanoow tabartaada ayaa kuu runsheegtay.
Waxa aad adigu tahay uun baad iskucaddeysay maandhe, cid aan adiga ahaynna meeshan kumaceebaysna xaqiiqdii.
Maryaha qummaati udhigo waayo anigu caay iyo habaar midna wax la igagamaqaado sidaad ogtahayba. Meeshan sidaan doono ayaan waxa aan doono kagafaalloonayaa, waxna kamaqaban kartid maandhoow.
I’m here to stay; so, live with it or wilt away. Since when did a lion give a toss to a little monkey making noises up a tree?
I can’t understand your Fucking broken English, i kow you fucking too old guy tried to make show up like fuvking hooker women..
Jawaab enough for you ah mar hore ayaan ku siiyay, in lagu khaniiso mooyee hari maysid waana Abaalka Oday Juhula ah oo reer bartay.
Maahmah baa ah ogaadeen intuu Nabad kaaga gooyo Colaad kaagama gooyo, Anigu Qof ahaan waxaad iigu Qiimaysan tahay yaxar ogadeen kkkkn kkkk kkkkk kkkkk Eey Iyo Doofaar baa iska kaa dhalay.
Nacalad ilko Dhaadheer.
Axmeq Madoobe oo Toban weji leh, Tobon Urur Diimeed soo Maray, Toban midab leh kkkk kkkk kkk baa Tolkaa ugu Caqli Badan isaguna Cabdi Ileey buu ku Dambayn doonaa.
Farmaajo iyo Janan oo heshiiyo baa kaaga Xanuun badan Adigoo Hooyada lagugu hor Fuulo!!!! Waa Hubaal in waqti aan dheerayn aad ka dhuuman doonto Baraha Bulshada oo Sidaadii Eeynimada iyo Dulliga ahayd aad hoos Fiirin doonto.
Waan ogahay insysan hadalladaadu xikmad iyo micno midno ku Fadhiyin, Laakiin Lax Tuugo ah sideedii baan Rabaa inaan Futada Shabbad kaaga dhejiyo si aan kuu tuso dadka inaysan kugu kadsoobin.
Yaxar Ogaadeenoow joogsan waydaye ceeb ayaan cagaha kuu gelin Waana Ballan inaan kaa Eryo Marqaannews.
Its just same to me if you yeild or silent mother Fucker.
Eey haddaad Cayriso iyo haddii Kaleba inuu Carrabka Lulo oo Hiraan hiro waa u Dhaqan kkkkk kkkkk kkkkk ,.
Yaxar Ogaadeenna illaa futada laga Khaniiso ma fariisto.